Maneho 1-36 ny 79 vokatra
Vary voankazo maina sy lavenona
Ny Aloe dia zavamaniry mitovy amin'ny kattika maniry amin'ny fararano mafana sy maina. Ny Aloe dia manamboatra akora roa, gel ary latapatra, izay ampiasaina amin'ny fanafody. Ny Aloe gel no mazava… ..
Ny vovoka Paeonol (552-41-0)
Ny Paeonol (2-hydroxy-4-methoxyacetophenone) dia singa iray goavana amin'ny sombin-tsimoka maina amin'ny Paeonia suffruticosa Andrews ……
Vovoka tsy Nonapeptide-1 (158563-45-2)
Ny Nonapeptide-1 dia peptide synthetic izay misy Arginine, Lysine, Methionine, Phenylalanine, Proline, Tryptophan ary Valin. Izany koa……
Dipot potassium Glycyrrhetate vovony (68797-35-3)
Dipot potassium Glycyrrhetate dia derivative alikaola. Ny vovobony voaloham-bokotra «Gotcyrrhetate» dia ampiasaina betsaka …….
Beta-Arbutin vovoka (497-76-7)
Alpha-Arbutin Powder (84380-01-8)
Ny vovony Alpha-Arbutin dia azo amin'ny alàlan'ny fitrandrahana enzymatic amin'ny hydroquinone na Beta-Arbutin …….
Ny vovony Tranexamic Acid (1197-18-8)
Tranexamic Acid dia antifibrinolytic amin'ny fanakanana ny tranonjaza famatorana lysine amin'ny plasmin sy ny elastase …….
Ny vovony phosphore magnesium ascorbyl (113170-55-1)
Ny vovony phosphore magnesium ascorbyl (magnesium-1 …….
L-Ascorbic vovony asidra (50-81-7)
Ny Vitamin C madio dia fantatra amin'ny hoe L-Ascorbic Acid. Ny "L" manoloana ny Ascorbic dia manondro ny fomba fiasan'ny molekiola …… ..
Vovoka peptide silk (96690-41-4)
Ny peptide silk dia karazana akora polypeptide tsy misy rano amin'ny alàlan'ny fanimbana ny proteinina fibrazy silk, ……….
Ny vovony matrixyl (214047-00-4)
Matrixyl dia palmitoyl-pentapeptide 3 ary peptide ity izay mandrisika manokana ny syntagen collagen ary …….
Ny vovony Squalane vovoka (111-01-3)
Squalane dia vokatra voajanahary, maha-tsy anaty sy tsy mahafaty. Hita amin'ny alàlan'ny hidroôroan'ny …… ..
Sodium L-ascorbyl-2-phosphate (SAP) dia toy ny rano voajanahary ...
Ny vovobony Phloretin (60-82-2)
Phloretin, alia trihydroxy phenol acetone 2,4,6-trihydroxy-3- (4-hydroxyphenyl) propiophenone. Io no ……
Ny vovoka asidra Kojic (501-30-4)
Ny asidra Kojic dia pyranone izay 4H-pyran nosoloin'ny vondrona hydroxy eo amin'ny toerana 5, hydroxymethyl …….
Kojic asidra dipalmitate vovoka (79725-98-7)
Kojic asidra dipalmitate (KAD) dia avy amina vokarina asidra kojic manome fitoniana ambony. Kojic ...... ..
Ny vovony Collagen (9064-67-9)
Collagen no proteinina mivaingana indrindra ao amin'ny habaka an-tsokosoko amin'ireo trafika maro samihafa ao…
Alladiin vovony (97-59-6)
Allantoin dia zavatra simika simika misy formula C4H6N4O3. Antsoina koa hoe 5-ureidohydantoin na glyoxyldiureide… ..
4- (Benzyloxy) phenol powder (103-16-2)
4- (Benzyloxy) fenol, antsoina koa hoe Monobenzone ary monobenzyl eter an'ny hydroquinone (MBEH) dia ……
Vovony Pal-GHK (147732-56-7)
Pal-GHK, antsoina koa hoe Palmitoyl tripeptide-1 ary palmitoyl oligopeptide (Sequence: Pal-Gly-His-Lys), dia ……
Ny vovony Nonapeptide
Nonapeptid dia oligopeptide niforona avy amin'ny asidra amina sivy. Ny teny oligopeptide dia mifandraika amin'ny peptide iray novolavolaina tamin'ny rojo iray ……
L-Carnosine vovony (305-84-0)
L-Carnosine dia baran-trano fananganana proteinina izay vokarina voajanahary ao amin'ny vatana. Hita any hozatra izany rehefa… f …….
Dobo dipeptide-2 (24587-37-9)
Dipeptide-2 dia misy amina aminoine valine sy tryptophan, Izy io dia karazana peptide. Dobo dipeptide-2 dia ……
Ny vovoka asidra hyaluronika (9004-61-9)
Ny asidra hyururonika dia anionika, glycosaminoglycan tsy dia miparitaka be …….
Ny vovony Ferulic Acid (1135-24-6)
Ny asidra Ferulika dia asidra ferulika izay misy ny asidra trans-cinnamic mitondra methoxy sy hydroxy substituents …….
Ny vovony Tretinoin (302-79-4)
Tretinoin, fantatra ihany koa amin'ny asidra rehetra-trans-retinoic (ATRA), dia fitambarana vitamina A …….
Ny vovo-dronono famonosom-bary
Ny angonin'ondry dia loharano mahavokatra, otrikaretina fitomboana ary cytokine mavitrika bio. Mifototra amin'ireto ……….
Ny vovoka Nicotinamide (98-92-0)
Nicotinamide dia endrika iray hafa amin'ny vitaminina B3. Ampirobonina ho anti-antitra io satria… ..
Ny vovony Minoxidil (38304-91-5)
Ny gilasy Minoxidil ampiharina amin'ny volon-koditra dia ampiasaina handrisihana ny fitomboan'ny volo eo amin'ny lehilahy sy ny vehivavy vehivavy miaraka amin'ny …….
Ny vovon-kena (1415-73-2)
Ny vovony aloina dia simika voajanahary hita ao amin'ny hoditry ny zavamaniry Aloe Vera izay misy fiantraikany laxative rehefa …… ..
Ny vovony asidra Ellagic (476-66-4)
Ny asidra Ellagic dia famokarana polyphenol voajanahary hita ao anaty zavamaniry ary manome UV voajanahary …….
Ny vovony seramida (100403-19-8)
Ny seramika dia kilasy misy heterogen ao amin'ny stratum corneum ao amin'ny hoditra epidermis. Ceramides ......
Carboxymethyl chitosan vilia (83512-85-0)
Ny vovo-dronono Carboxymethyl chitosan dia mahasalama tsara ny rano sy ny simika tsy manam-paharoa ……